Ifektri yeSouce - China Abakhiqizi baseSouce, abahlinzeki
Ilayisi lekhwalithi ephezulu elikhethiwe, wonke amaconsi eviniga aphilile futhi aphephile
Esikhundleni soshukela omhlophe, uviniga welayisi kuhlanganiswe noju kuhlanganiswe ngokucophelela ukwenza ukunambitheka kumuncu futhi kube mnandi futhi kube nephunga.
Isikhathi esanele sokubila kwemvelo, ubuciko besikhathi nobuchule ndawonye.
Ukunambitheka kwe-asidi ethambile, ukunambitheka okuluhlaza, okulungele ukupheka imifino nezilwandle, isaladi elibandayo, cwilisa ekudleni.
Yenziwe ngezinhlamvu zesame ezigcotshwe ngotshani nezinhlamvu zamantongomane, okunamathiselwe kwesesame okuxubile kuyinhlayiya ejiyile, ensundu, nephunga elinamandla, elihlukile le-nutty. Isetshenziswa kakhulu ekudleni kwase-Chinese noma kwase-Asia, kwama-noodle, isaladi, isoso esibhodweni esishisayo, amabhanisi asontekile ashubile noma nje njengokusakazeka njengebhotela lamantongomane. Imvamisa ithengiswa ngezimbiza zengilazi, kungqimba kawoyela ngaphezulu ukulondoloza ukusha kwayo. Ukupakisha kwenqwaba nensizakalo ye-OEM iyatholakala, wamukelekile ukuthumela izidingo zakho kithi.
Yenziwe ngembewu yesame ethosiwe, i-sesame unamathisela onamathiselwe, onsundu, onephunga elinamandla, elihlukile le-nutty. Isetshenziswa kakhulu ekudleni kwase-Chinese noma kwase-Asia, kwama-noodle, isaladi, isoso esibhodweni esishisayo, amabhanisi asontekile ashubile noma nje njengokusakazeka njengebhotela lamantongomane. Imvamisa ithengiswa ngezimbiza zengilazi, kungqimba kawoyela ngaphezulu ukulondoloza ukusha kwayo. Ukupakisha kwenqwaba nensizakalo ye-OEM iyatholakala, wamukelekile ukuthumela izidingo zakho kithi.
ukuthungwa okubucayi, ukunambitheka okucebile kwamantongomane
Ukunambitheka okuhle, ukunambitheka kwamantongomane okunothile nokusebenza okuhle kokucubungula
I-peanut butter iyinhlanganisela yokudla noma isakazwa eyenziwe ngomhlabathi, amakinati awomile. Umbala webhotela lamantongomane uphuzi ngokunsomi, ukuthungwa okuhle, okumnandi, nephunga eliqinile lamakinati, hhayi elikhuntile, hhayi izikelemu. Amantongomane asetshenziswa ngokuyinhloko njengesidlo sasemini sezingane zesikole. Ibuye isetshenziswe njengesithako kuma-crackers, ama-sandwich, amakhukhi ane-peanut-flavored, izimpahla ezibhakiwe, uswidi, okusanhlamvu kwasekuseni ne-ayisikhilimu, njll. Ibhotela lamantongomane aligcini nje ngokunotha ngamaprotheni ezitshalo, kodwa futhi linamavithamini amaningi, i-niacin, i-vitamin E namaminerali. Inothile ngomsoco futhi inokunambitheka okuhlukile.
Amabhotela Amantongomane 340g
Amabhotela Amantongomane 510g
I-organic soy sauce ibhekisa kusosi wesoya owenziwe ngezitshalo eziphilayo njengezinto zokusetshenziswa. I-Organic soy sauce iqukethe ukunambitheka okunothile kosoya wesosi namafutha, isinongo sekhwalithi engajwayelekile, esifanele ukuditshwa, sifakwe usosi wesoya, ukugcwaliswa, isobho, ukugovuza, njll. Kuqinisekiswe yiNational Organic Food Agency njengokudla okuphilayo, kuhlanzekile futhi kunempilo kunokudla okuluhlaza.
Okuhlangenwe nakho okusha kwe-rose neviniga
Izimbali ezikhethiwe ezidliwayo, ngemuva kokuvutshelwa kwemvelo, uketshezi lwethu lweviniga lwama rose lucacile, lunephunga elimnandi, lunambitheka omuncu futhi omncane.
Izindlela ezintsha zokuphuza uviniga:
Hlanganisa uviniga we-rose ngo-1: 6 bese uwaxuba noju ngokwendlela oyithandayo. Jabulela iphunga lezimbali nephunga lakho.
I-Ponzu Soy Sauce (I-Sauce Yokuntywila)
I-Ponzu soy sauce yenziwa ngesosi yesoya yaseJapane yesobho kanye nejusi kalamula eligxilile, ngakho-ke umkhiqizo wokugcina unambitheka kabusha, ukunambitheka okunephunga nokuhlangana okuhle. Inokulinganisela okuphelele kasawoti, oku-tangy nokunoshukela ukukhulisa ukunambitheka kwenyama eyosiwe, izinkukhu, izinhlanzi zasolwandle noma imifino. Ifanele ukudipha amadombolo, izoso kanye nesaladi.
Ikhukhi leLadyfinger, I-Hawthorn Strip, Ukudla Amakinati Anosawoti, Amaphakethe Esoso Soy, Induku entsha ye-Bean Curd, Izingane Amabhisikidi,